SIDA LOO KORO ROSE KA GOOYN, XEERARKA AH EE TARANTA "BOQORADDA UBAXA" - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Rose waa boqoradda ubaxyada. Ubax xoog leh leh caraf udgoon - waa hab weyn oo lagu farxi karo naftaada ama kuwa aad jeceshahay. Caleemaha ubaxyada ah ee beerta dhexdeeda marnaba lumiso quruxdiisa iyo qaab ciyaareedka ubaxyada kale. Waxay, sida astaan ​​u ah jacaylka, weynaanta iyo jilicsanaanta, waxay kugu dhiiri gelineysaa guulo cusub.
Badanaa waxaad jeclaan lahayd inaad koraan ubax ka yimid ubaxyada lagu soo bandhigay qaraabada, qaraabadaada, asxaabtaada, laakiin ha ahaato sida aad u tijaabiso, gooyntaada lama aqbalo lana qalajiyo. In this article waxaan kuu sheegi doonaa sida loo abuuro jirid Rose ah oo ka soo bouquet aan dhibaato.
Sida loo diyaariyo guntooda koraya
Faafinta ubax by jarida - Habka ugu caansan uguna wax ku oolka ah ee loo abuuro caruur isku mid ah. Si aad u dacaaysato aad dooratay ama aad ku deeqday guska oo leh gooyn, aad u baahan tahay wax badan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo gogasho si loo gooyo: ku qoy koob oo ubax ah baaldi biyo ah habeen kasta, kuna rid mashiinka biyo nadiif ah maalintii. Goynta waxaa la samayn karaa marka dhirta ubaxa bilaabaan inay dhacaan.
Waxaan dooran karnaa maaddada loo yaqaan "grafting". Waa inay ahaato Rose oo leh stem xooggan iyo caleemo nool. Marka ugu horeysa ee la gooyo cutubka koowaad, ka nadiifi sidan. Marka ay gaaraan caleemaha nool, ayaa asliga ah la jarayo 15 cm, qabashada 2-3 burooyinkeeda.
Ka dib markii loo diyaariyo gooynta, waxay ku qoyaan xalka iftiinka kiciyaha kobaca 24 saacadood.
Waa muhiim! Xusuusnow in gooynta dhumucdeed ee stem waa inay ahaadaan ugu yaraan 0.5 mm.
Diyaarinta ciidda loogu beero gooynta
Wixii beerta gooynta waxaad u baahan tahay aasaas guud, kaas oo si fudud loogu iibsan karo dukaanka. Sidoo kale, astaantan waxaa lagu diyaarin karaa guriga iyada oo aan wax kharash ah lahayn.
Arrintan awgeed waxaad u baahan tahay inaad ku darto 2 qaybood oo dhul beerta ah, 2 qaybood oo ah humus iyo 1 qayb oo ciid ah. Xooga ciidda si fiican, oo cajiinaya buruqyada iyo ka saara murgaalada.
Si koritaanka nabdoon ee gooyn, waxaa lagu talinayaa in diirimaad dhulka ku foornada - tani waxay kaa caawin doontaa in la baabi'iyo cudurada kala duwan.
Ma taqaanaa? Wixii fiiqan qayb ka mid ah qaybta dhexe ee habka.
Heerka ugu sarreeya ee taangiga, oo aad qorsheyneyso inaad ku beerto gooynka casaan, waa 20 cm, oo kiiskani ku dhowaad dhammaan jarida ayaa noqon doona dhulka hoostiisa. Xagga hoose ee taangiga ha ilaawin inaad soo saartid dheecaan - ma u oggolaan doontid in biyaha la dhigo oo lagu badbaadiyo xididada gooynta koritaanka dheeraadka ah.
Sida ugu dhakhsaha badan dhammaan qaybaha diyaar u yihiin, waxaad dhigi kartaa appendix la kariyey ka soo boodhada of aabta, iyada oo aan illoobin in ay u qoto dheer dhulka.
Sida loo koro jirida barafka
Sida xaqiiqda ah waxaad ka maqashay habka koritaanka xoogga leh ee caawinta baradho. Waxaa loo isticmaalaa bannaanka u khibrad leh, ma ahan mid walaac ah. Sidan oo kale, waxaad ku kori kartaa Rose ah in koraa beertaada, iyo Rose ka soo bouquet ah.
Haddii aad horay u diyaarisay gooyn, ka dibna waxay ubaahan tahay inay diyaariso baradhada. Kuwa ugu fiican ee digriiga ah ee waaweyn iyo dhexdhexaad ah. Fadhi si fiican u baaro waxyeello ama jirro.
Si taxadar leh uga saari indhahaaga baradho si looga hortago biqilka. Iyada oo mindi fiiqan, samee indentations yar oo ku jira iyo ku dheji geesaha fiiqan ee guntooda halkaas.
Hadda waxaad dhisi kartaa gooynta dhulka oo aan cabsanayn in ay waayaan qoyaan - baradho ha u oggolaan in ay qalalaan.
Sidee loo gooyaa gooynta biyaha
Hab kale oo loo gooyo gooyn waa biyo. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad u diyaariso gooynta naftooda iyo weel biyo leh oo nadiif ah.
Nidaamkan, waxa ugu wanaagsan inaad karkariso, maadaama bacda ceeriin ay ku jiri karto bakteeriyo kala duwan iyo fangaska. Sidoo kale biyaha dhexdiisa waxaad ku dari kartaa dhuxusha, oo leh sifooyin udub dhexaad ah iyo ka hortag ubax.
Ma taqaanaa? Wakhti ahaan, dhowr dhibcood oo bacriminta waa in lagu daraa biyaha, waxay noqon doontaa mid waxtar leh koritaanka jarista.
Daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in caleemaha aysan taaban biyaha, maadaama ay bilaabi karaan si aad u dhaqso badan.
Awoodda waa in la xiro oo la geliyo foorno ama foorno, oo ay ku sameeyaan godad iyaga ku yaal oo gooynaya.
Waa muhiim! Gooyn waa in aan laga tagin qorraxda tooska ah, maadaama ay qalajin karaan. Wakhti ahaan kormeer ku samee xididada cusub iyo kor u kaca biyo cusub.
Marka xididada dheer ee la sugayo (20-30 maalmood), waxaad ogaan doontaa in qaabkoodu uu ka duwan yahay qaabka xididdada kuwa gooynta ah ee xididada isla markiiba ah dhulka. Waxay yihiin kuwo khafiif ah oo hufan. Roots ayaa koray biyo, u nugul jabis iyo aad u jilicsan. Waxay si sahlan u burburin karaan dib u celinta dhulka.
Mararka qaarkood dhirta waa in ay koraan xididada cusub halkii ay kuwan lahaayeen, maadaama ay si xun u habboon yihiin ciidda oo ay ku engegaan jawi qallalan. Warshadda biyaha waa in lagu shubaa substrate iftiin marka xididdada gooynta ay gaaraan 5 cm.
Ma taqaanaa? Haddii xididdadu ay muddo dheer ka badan yihiin 30 maalmood oo ay ku jiraan biyaha, markaa waxay noqoneysaa wax aad u adag in ay degaan dhulka.
Haddii aad koraan gooyn jiilaalka, waxaa ugu wanaagsan inaad ka baxdo qolka daaqadaha ee daaqada cadceeda. Habkani ma aha mid had iyo goor waxtar leh, maxaa yeelay waxaa jira oksajiin aad u yar oo ku habboon nidaamka xididada wanaagsan ee biyaha.
Sidaa darteed, gooynaya xididdo ee weel leh ciid ama cammuur aad u fudud. Natiijada abuurista ubaxyada laga soo bilaabo bouquet ee biyaha waxay ku xirnaan doontaa xilliga xiga, qalabka bilowga iyo sabirkaaga.
Sida loo aaso a Rose ah ee xirmada
Habkani wuxuu wax ku ool ka badan kii hore, laakiin kama duwana. Sidaa awgeed waxaad u baahan tahay dabo cusub oo diyaarsan, kaas oo la dhigo weel biyo nadiif ah.
Dusha sare ee bangiga xirmo ah, ka tago god yar oo hawo ah, sidaa darteed warshadda ma joogaan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Weel dhoobo ah ayaa la dhigayaa shaambad iftiin leh.
Waa muhiim! Caleemaha hore way diirin karaan oo waa in laga saaraa xirmada isla markiiba.
Ka dib qiyaastii 15 maalmood, caleemaha kowaad waxay bilaabaan inay ka soo baxaan burooyinkooda. Marka ugu horeysa, caleemaha waxay ku jiri doonaan casaan, laakiin wakhti ka dib waxay cagaar u noqon doonaan. Kadibna waxay u baahan doonaan in la gooyo weedh fiiqan oo loogu talagalay bararka.
Waxaad ku dari kartaa xal bacrimin yar oo biyo ah.
Geedi socodka ee dhirta taranka ee ku filan oo ku filan. Qiyaas ahaan 30 maalmood oo ah xididdada ugu horreysa waxay bilaabaan inay ka dhigaan habka. Marka xididdadu u muuqdaan (2-3 cm), jirida waa in lagu dhex beeray dheriga.
Ku dabool bucsho bakeer ah oo isku mid ah, ha xirxirin, kadibna u dhaaf ilaa 2-3 toddobaad. Mar mar, geedka waa in lagu waraabiyaa xal fudud oo bacriminta iyo doofaarka.
Gooba geedka, habka Burrito
Habka cirridka ayaa sidoo kale loo yaqaan habka jarida unglow.. Tusaale ahaan, haddii dabka aad jeceshahay uu waxyeello u geysto, ama aad rabto inaad ku koriso dhirta hadiyaddeeda, oo ay horey u qalajeen oo beeraan waxoogaa yar, habka cayayaanka ayaa iman doona badbaadinta - sii kordhaya wargeyska.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso gooynta. Maadaama aysan jirin caleemo iyo budo weli, afkoda waa in la doortaa dhumuc. Waxay haystaan ​​qoyaan ka badan inta khafiif ah.
Gooyntu waa inay ahaataa qiyaastii 20-25 cm dherer. Iska eeg caleemaha si taxaddar leh calaamadaha waxyeellada iyo cudurada. Leaves waa in laga saaro. Caleemaha waxay u baahan yihiin in si taxaddar leh loola dhaqmo bacrimin si ay u koraan.
Gooynta la dhammeeyey waxay u baahan tahay in la isku laabo hal mid, halis ama "burrita", oo si taxadar leh loogu duubo wargeys. Laga soo bilaabo kore waxay u baahan tahay in la waraabiyo biyo, laakiin ma heysata.
Wargeysku waa inuu qoyan yahay, laakiin ma kala soocayo. Si aad u ilaaliso qoyaan joogto ah ee rogrogmada, waxaad u baahan tahay inaad ku riddo bac caag ah.
Ma taqaanaa? Habkani wuxuu suurtogal u yahay inuu diyaariyo wax badan oo gooyn ah, sidaa darteed waxaad ku tijaabin kartaa qoyaan adiga oo diyaarinaya dhowr "burritos".
Si ay caleemaha u qaataan xididka, waxaad u baahan tahay inaad xirto xidhmo meel gudcur leh heerkul joogto ah + 18-20 ° C. Toddobaad kasta waxaad u baahan tahay inaad hubiso xaaladda guntooda ee wargeyska iyo, haddii loo baahdo, qoyaan. Qiyaastii 30 maalmood, ayaa xididdadu ka muuqan doonaan.
Sida loo koro habka jarida Trannua
Habkan, ma aha habka beerto in ay muhiim tahay, laakiin habka loo diyaariyo gooyn. Waa in loo diyaargaroobaa sidan oo kale si aad u kiciso socodka istaarijinimada ee asliga ah.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay asliga ah ee Rose ah oo aad jeceshahay, ka jar caarada ubax yar. Guntu waa inay ahaataa biyaha, qorraxda dhexe.
Maalmo yar ka dib, waxaad ogaan doontaa in kelyuhu ay bararsan yihiin, laakiin uma baahnid inaad u oggolaato in ay dillaacaan. Isla markiiba gooyaa asliga ah galay gooyn.
Ma taqaanaa? Marka ay burooyinku bararaan, waxay ka dhigan tahay in dhirtu ay heshay awood si ay u sii wato nolol, laakiin si goos goosad la'aan ah ayeey u tahay dhimasho.
Waqtiga ugu wanaagsan ee habkan oo kale ah waa Juun-Julaay, ka dib markii uu mawjada ugu horeysay ee ubax. Gooyntu waa inay ahaataa ilaa 20 cm oo dheer, dhammaan caleemaha marka laga reebo labada sare waa la jaraa.
Marka la eego habka Tranois, waa in lagu beeray meel qorrax leh, tan iyo xaaladaha noocaas ah nidaamka xididka ayaa horumaraya. Sida laga soo xigtay habkan, guntooda waa in si degdeg ah loo beeray meel joogto ah. Iyo ugu fiican ee dhammaan qaybo dhowr ah - si waxtar leh badbaadada.
Ku beeray xagasha 45 °, sidaas awgeed jirku wuxuu helayaa oksijiin badan. Waxaan ku daboolnaa daboolka leh dhalo caag ah, waxoogaa daboolaya cawska iyo caleemaha. Laakiin wax badan maahan, tan iyo iftiinka qorraxdu waa inuu yimaadaa gooynta.
Daryeel dheeraad ah ayaa la mid ah hababka caadiga ah. Xakamee ciidda agagaarka hoyga loogu talagalay ogsijiinka. Weel caag ah oo daboolaya dhirta, ka tago ilaa jiilaalka, xitaa haddii uu jiro caleemo.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo abuuro rosoog ka soo bouquet guriga. Noocyada kala duwan ee soo-jeedda sii kordhaysa ka soo gooyn, sida aad arki karto, waa multifaceted. Waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato adiga kuu gaar ah, oo kugu habboon adiga iyo wax soo saar.